13 Kulliyadaha Bulshada ee ugu Fiican California 2022
Kulliyadaha bulshada ee ugu wanaagsan California ayaa lagu sharraxay oo looga dooday maqaalkan si loogu fududeeyo gelitaanka kuwa danaynaya inay dhigtaan kulliyadda bulshada ee California.
Kaliforniya waa gobolka saddexaad ee ugu weyn Maraykanka oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 38 milyan sidaa darteed waa dawlad firfircoon oo leh xeebo qurux badan, buuro, keymo, iyo astaamo kale. Dawladani waxay leedahay Los Angeles - fadhiga Hollywood - San Francisco iyo magaalooyinka kale iyo jasiiradaha. Kuwaas oo dhami waxay Kaalifoorniya ka dhigaan meel xiiso leh oo wax lagu barto, waxaad la kulmi doontaa noocyo kala duwan oo dad ah, oo si siman u ballaadhin doonta khibradaada.
Qaar ka mid ah jaamacadaha iyo kulliyadaha ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Mareykanka oo dhan iyo xitaa adduunka waxay ku sugan yihiin gobolka California. Hay'adaha ugu sarreeya sida UCLA, Jaamacadda Stanford, Jaamacadda California, Berkeley, iwm ayaa halkan jooga kuwaas oo dad badan iyo hal -abuurro soo geliya gobolka.
Shaki kuma jiro in hay'adahani yihiin kuwo qaali ah oo aad u tartamaya oo haddii aadan waligaa ogayn, hadda waad garanaysaa. Sidoo kale, waxay aad uga qaalisan yihiin ugana tartamaan ardayda caalamiga ah, iyo ku noolaanshaha gobolka sidoo kale waa qaali haddii ay tahay ardayda gudaha ama kuwa caalamiga ah. Si kastaba ha noqotee, shahaadooyinka aad halkan ka heli doonto waxay leeyihiin sharaf caalami ah.
Wali waxaa jira hab aad ku amri karto xasiloonida California oo aad wali ku hesho waxbarasho qiime ka jaban sidoo kale aad ku raaxaysato waxbarasho tayo leh oo aad ku kasbato shahaado caan ah. Habkan ayaa ah inaad dhigato kulliyadda bulshada, halkaas oo aad ka heli doonto xirfadaha, aqoonta, iyo farsamooyinka si aad ugu guulaysato nolosha dugsiga kadib.
Ardayda qaarkood waxay doorbidaan kulliyadaha bulshada tanina waxay ugu wacan tahay waxbarashada hoose, aragti yari iyo wax-ku-oolnimo badan, iyo helitaanka xirfado aad ku dabaqi karto xaaladaha nolosha dhabta ah. Tusaale ahaan, haddii aad jeceshahay xirfadaha sida nijaarnimada, korontada, tuubistaha, koodhka caafimaadka, kaaliyaha dhakhtarka, iwm, oo aad rabto inaad ku biirto xirfadda, kulliyadda bulshada ayaa kuu habboon.
Marka hore, jaamacadaha iyo kulliyadaha afarta sano ah ma bixiyaan barnaamijyo noocan oo kale ah, kaliya kulliyadaha beesha ayaa sameeya kuliyadahaasina waxay siiyaan ardayda waxbarasho tayo leh oo gacan-qabasho leh taas oo ka dhigaysa inay isla markiiba bilaabaan shaqadooda markay dhammaystaan ​​barnaamijkooda.
Marka labaad, si ka duwan jaamacadaha iyo kulliyadaha afarta sano ah, waxay qaadataa ugu badnaan laba sano in lagu dhammaystiro barnaamijka shahaadada kulliyadda bulshada oo lagu kasbado Shahaadada Associate, shahaado, diblooma, ama u qalmidda lagama maarmaanka ah oo ay aqoonsan yihiin oo ay aqbaleen loo-shaqeeyayaasha adduunka oo idil. Intaa waxaa dheer, dhibcaha barnaamijkaaga waxaa loo wareejin karaa jaamacad ama kulliyad afar sano ah.
Ugu dambayntii, waxaa la joogaa waqtigii aan galnay mawduuca ugu weyn oo annaga oo aan wax kale oo dheeri ah gelin, aan guda galno. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho jadwalka hoose si aad ugu sahlanaato guud ahaan maqaalka.
1 Waa maxay Kuliyada Bulshada ee California?
2 Yaa Ku Biiri Kara Kulliyadda Beesha ee California?
3 Waa Maxay Shuruudaha Lagu Biirayo Kulliyadda Bulshada ee California?
4 Kulliyadaha Bulshada ee ugu Fiican California
4.1 1. Kulliyadda Dooxada Irvine
4.2 2. Kuliyada Beesha Lake Tahoe
4.3 3. Kulliyadda Magaalada Santa Barbara
4.4 4. Kuliyadda De Anza
4.5 5. Kulliyadda Magaalada Pasadena
4.6 6. Kuliyada Moorpark
4.7 7. Kuliyadda Dooxada Imperial
4.8 8. Kulliyadda Hartnell
4.9 9. Kulliyadda Santiago Canyon
4.10 10. Kulliyadda Mt San Antonio (Mt SAC)
4.11 11. ​​Kuliyada Las Positas
4.12 12. Kuliyadda Diablo Valley
4.13 13. Kuliyadda West Valley
5 Su'aalaha la isweydiiyo ee Kulliyadaha Beesha ugu Fiican California
Waa maxay Kuliyada Bulshada ee California?
Kulliyadaha bulshada ee Kaaliforniya waa nidaamka waxbarashada dugsiga sare kadib ee gobolka California oo u baahan laba sano in la dhammaystiro oo bixiya shahaadada Associate, diblooma, ama shahaado ku xiran inta aad barnaamijka wax ku baratay. California waxaa ku yaal 116 kulliyadood oo la aqoonsan yahay
Yaa Ku Biiri Kara Kulliyadda Beesha ee California?
Qof deggan California wuxuu ku biiri karaa, yacni, inuu galo mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ee California haddii ay haystaan ​​diblooma dugsiga sare ama u dhigma oo ay qanciyaan u -qalmitaanka kale iyo shuruudaha oggolaanshaha.
Dadka aan deganayn, oo ay ku jiraan arday caalami ah, ayaa sidoo kale la oggolaan karaa haddii ay iyaguna haystaan ​​diblooma dugsiga sare ama u dhigma, oo ka weyn da'da 18, kuwaas oo xukunka guddiga dugsiga awood u leh inay ka faa'iidaystaan ​​tilmaamaha la bixiyey.
Intaas waxaa sii dheer, kulliyadaha bulshada ee California waxay aqbali karaan carruurta aan qaangaarin ee aan haysan dibloomada dugsiga sare ama u dhigma koorsooyinka amaahda sida waqti-dhiman gaar ah ama arday waqti-buuxa qaas ah.
Waa Maxay Shuruudaha Lagu Biirayo Kulliyadda Bulshada ee California?
Shuruudaha lagu codsan karo gelitaanka mid ka mid ah kulliyadaha beesha ee California waa sahlan tahay, waxaad u baahan tahay inaad haysato dibloomada dugsiga sare ama u dhiganta, sida kor ku xusan. Taasi waa dhammaan shuruudaha aad u baahan tahay si aad ugu biirto kulliyadda bulshada ee California.
Kulliyadaha Bulshada ee ugu Fiican California
Halkan waxaa ah kulliyadaha bulshada ugu fiican ee California, iskuxiryada mid kasta oo ka mid ah machadyada ayaa la bixiyay haddii aad aragto mid ka mid ah dugsiyada oo xiiso leh, waxaad gujin kartaa iskuxirka si aad wax badan uga ogaato dugsiga oo aad u bilowdo codsashada.
California waxaa ku yaal 116 kulliyadood oo la aqoonsan yahay laakiin kaliya 13ka ugu fiican ayaa la xushay oo looga dooday maqaalkan.
Kuliyada Bulshada ee Lake Tahoe
Kulliyadda Magaalada Santa Barbara
Kuliyadda De Anza
Kuliyadda Imperial Valley
Kulliyadda Mt San Antonio (Mt SAC)
Kuliyadda Las Positas
Kuliyadda Diablo Valley
Kuliyada West Valley College
1. Kulliyadda Dooxada Irvine
Kulliyadda Dooxada Irvine oo sida caadiga ah lagu tilmaamo xarfaheeda hore sida IVC waxaa la aasaasay 1985 oo ah kulliyadda bulshada ee Irvine, California, waxayna ku jirtaa liiska kulliyadaha bulshada ugu fiican California. Ku fadhida dhul baaxaddiisu ka badan tahay 60 hektar oo dhul ah, IVC waxay ku faantaa tas-hiilaad iyo qalab heer sare ah, shaqaale u heellan, iyo kulliyad heer sare ah oo u heellan inay ardayda ku qalabeeyaan aqoonta lagama maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin si ay ugu guulaystaan ​​shaqooyinkooda.
11 iskuul tacliimeed oo ku yaal Kulliyadda Irvine Valley waxay bixiyaan shahaado la xiriirta in ka badan 70 majors oo ganacsi, farshaxan, naqshad isku dhafan, iyo cilmiga bulshada. Waxa kale oo jira 60 barnaamijyo xirfadeed iyo farsamo oo bixiya shahaado kuwa doonaya inay tababar u qaataan shaqo gaar ah ama qaataan koorsooyin horumarkooda shaqsiyeed.
Kulliyaddu waxay si siman u leedahay barnaamij waxbarasho masaafo (onlayn ah) oo u oggolaanaya ardayda inay qaataan oo ay dhammaystiraan casharrada onlaynka ah. IVC waxay leedahay ku dhawaad ​​15,000 oo arday oo ay ku jiraan 550 arday oo ka yimid meel ka baxsan gobolka iyo dalka, sidaa darteed, waxay aqbalaan ardayda caalamiga ah. Qiimaha waxbaridda halkan waa $ 14,415 illaa $ 20,577.
2. Kuliyada Beesha Lake Tahoe
Kulliyadda Bulshada ee Lake Tahoe waxaa la aasaasay 1975 si loogu adeego dadka deggan Koonfurta Lake Tahoe ee California. Kuleejku wuxuu bixiyaa la-hawlgalaha farshaxanka iyo shahaadooyinka sayniska ee barnaamijyo waxbarasho oo aad u ballaaran kuwaas oo ka weyn 40 waxaana ka mid ah ganacsiga, cilmiga bulshada, iyo sayniska dabiiciga ah oo aad ku wareejin karto deyn hay'ad afar sano ah oo aad dooratay.
Haddii aad sidoo kale danaynayso inaad ku kasbato shahaado ama diblooma xirfadda ama koorsada farsamada LTTC waxay kaloo bixisaa in ka badan 20 barnaamijyo shahaado ah oo loogu talagalay ardayda xiisaynaya inay kala doortaan. Ardayda caalamiga ah ayaa hadda loo oggolaaday mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan shahaadooyinka iyo shahaadooyinka. Lacagta waxbaridda ee dadka aan degganayn California, ardayda gobolka ka baxsan, iyo ardayda caalamiga ah waa $ 205 cutubkiiba halka waxbarashada laga dhaafayo dadka deggan California oo iyaguna dhigta dugsi sare oo ku yaal California.
3. Kulliyadda Magaalada Santa Barbara
Kulliyadda Magaalada Santa Barbara waa mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ugu fiican California, waxaa la aasaasay 1909 taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ugu da'da weyn California. Kulliyaddu waxay leedahay saddex xarumood oo isku jira saacado yar oo kala fog. Dhismaha ugu weyn wuxuu ku yaal Cliff Drive, Schott Campus wuxuu ku yaal Padre Street, kan saddexaadna wuxuu ku yaal, Wake Campus oo ku yaal Waddada Turnpike, dhammaan Santa Barbara.
Kuleejku wuxuu bixiyaa barnaamijyo amaah oo kala duwan kuwaas oo loogu talagalay inay ku haboonaadaan nooca waxbarasho ee arday kasta doonayo. Waxaa jira Associate in Arts for Transfer (AA-T) iyo Associate in Science for Transfer (AS-T), tan waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay dhibcaha u wareejiyaan jaamacad ama kulliyad afar sano ah.
Kadib waxaa sidoo kale jira Associate in Arts (AA) iyo Associate in Science (AS) barnaamijyo shahaado ah kuwaas oo bixiya barnaamijyo tacliimeed oo aad u farabadan oo isugu jira isgaarsiinta iyo farshaxanka xorta ah ilaa aadanaha iyo cilmiga dabiiciga ah. Kuleejku wuxuu kaloo bixiyaa Abaalmarinta Shahaadada, Abaalmarinta Karti -xirfadeedka, iyo Abaalmarinta Waaxda. Barashada onlaynka ah ayaa sidoo kale la heli karaa.
4. Kuliyadda De Anza
De Anza waa mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ee ugu wanaagsan California, kulliyadda dadweynaha waxay ku taallaa Cupertino waxaana la aasaasay 1967. In ka badan 21,500 oo arday ayaa iska diiwaangashan dugsigan iyagoo raacaya shahaadooyinka la -hawlgalayaasha iyo shahaadooyinka xirfadda ee tiknolojiyadda baabuurta, maaraynta tamarta, iyo sayniska dhismaha, farsamo -yaqaanka cilmiga duurjoogta, iwm oo bixiya wareejinta dhibcaha Dugsiyada Gobolka California.
Kulliyadda De Anza waxaad ku kasban kartaa shahaado ama shahaado, u wareejin jaamacad, ama tababar xirfadeed. Dugsigu wuxuu ugu sarreeyaa bedelka, wuxuu aqbalaa ardayda caalamiga ah, wuxuuna siiyaa qof walba fursado kaalmo maaliyadeed. Qiimaha waxbarashada halkan wuxuu u dhexeeyaa $ 12,300 illaa $ 19,302.
5. Kulliyadda Magaalada Pasadena
Kani waa kulleej bulsheed dadweyne oo ku yaal Pasadena, California, USA oo la aasaasay 1924 iyadoo ay hadda iska diiwaangelinayaan ku dhawaad ​​29,200 oo arday oo daba ordaya shahaadooyin, barnaamijyo beddelaad, iyo shahaadooyin ka badan 200 barnaamij. Barnaamijyadan tacliimeed, koleejku wuxuu bixiyaa jawi waxbarasho oo tayo sare leh, hal -abuur leh, oo firfircoon oo dhiirrigeliya guusha ardayga.
Kulliyadda Magaalada Pasadena waxaa sidoo kale loo aqoonsaday meela badan oo darajayn ah inay tahay mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ugu fiican California. Intaa waxaa sii dheer, koleejku wuxuu leeyahay xero weyn, xarun dayax -gacmeed, xarun waxbarasho bulshada, iyo xarun kobcinta carruurta oo loogu talagalay bulshada Pasadena. In ka badan 1,200 oo arday oo ka kala yimid adduunka oo dhan ayaa halkan iska diiwaangaliyay, kulliyaddu waxay albaabada u furtaa ardayda caalamiga ah.
6. Kuliyada Moorpark
Koleejka Moorpark wuxuu ka mid yahay kulliyadaha ugu fiican California wuxuuna leeyahay ku dhawaad ​​12,000 oo arday oo iska diiwaangaliyay barnaamijyadeeda kala duwan ee shahaadooyinka iyo shahaado xirfadeed oo ardaydu go'aansan karaan inay ku dhammaystaan ​​kambuyuutar, onlayn, ama goob isku-dhafan. Ikhtiyaarada waxbarasho ee kala duwan ayaa loogu talagalay inay ardayda u oggolaato inay doortaan nooca waxbarasho ee dabacsan oo ku habboon iyaga marka ay la kulmayaan ujeeddooyinkooda waxbarasho.
Kulliyaddu waxay ku taallaa Los Angeles, halkan ku noolaanshaha ayaa hubaal noqon doona qaali, waxayna ardayda siisaa waxbarasho ku filan oo ay u baahan yihiin si ay u gaaraan ujeedooyinkooda waxbarasho iyo xirfadeed. Ikhtiyaariyada shahaadooyinka la -wareegidda iyo beddelka iyo shahaadooyinka waxaa lagu bixiyaa waaxyo badan oo dugsiga ah sida macluumaadka, caafimaadka, iyo fayoobaanta, ganacsiga, xisaabinta, bayotechnoolajiyadda, iwm.
7. Kuliyadda Dooxada Imperial
Sida Aasiyaanka ah sida magacan kulleejku u ekaan karo, waa kulliyadda bulshada ee California, USA, waana tan ugu fiican. Si ka duwan koleejyada dadku ku badan yihiin ee leh in ka badan 20,000 oo dhigta shahaadada koowaad ee jaamacadda, kuliyaddan waxaa dhigta 7,000 oo kaliya oo ah arday dhigta shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo sababta qaddarkan yar ee ardayda waxay noqon kartaa 50 darajo tacliimeed iyo barnaamijyo shahaado oo ay bixiso.
Kulliyadaha kor ku xusan waxay bixiyaan ku dhawaad ​​200 oo shahaadooyin laxiriira iyo barnaamijyo shahaado ah iyo barnaamijyadeeda kala duwan awgeed, waa wax iska caadi ah in arday badan ay halkaas ka codsadaan halka kan leh barnaamijyo yar uu yeelan doono arday tiro yar. Si kastaba ha noqotee, barnaamijyada caanka ah sida beeraha, ganacsiga, iyo STEM ayaa halkan lagu bixiyaa.
Intaa waxaa dheer, koleejku wuxuu siiyaa fursado waxbarasho ardayda doonaya inay u wareegaan jaamacad ama kulliyad afar sano ah. IVC-oo ku taal bariga San Diego-waxay bixisaa gudaha-kambuyuutarka iyo ikhtiyaarrada barashada dabacsan ee onlaynka ah waxayna u oggolaanaysaa ardayda oo dhan iyo kuwa kala duwan inay eryaan booliiska, iyo barnaamijyada tababarka sixitaanka.
8. Kulliyadda Hartnell
Waxaa la asaasay 1920 oo ku taal Salinas, California, Kulliyadda Hartnell waxay u heellan tahay ballaarinta fursadaha waxbarasho ee dadka liita. Waa hay'ad Hispanic-Serving-post-secondary ah oo bixisa shahaadooyin laxiriira iyo shahaadooyin xirfadeed ee barnaamijyada tacliinta sida STEM, kalkaalisada, cilmiga caafimaadka, farshaxanka wanaagsan iyo fanka, iyo qaar kaloo badan oo badan oo lagu dhammayn karo iyadoo la adeegsanayo fursadaha barashada internetka.
Kulliyadda Hartnell waxaa lagu aqoonsan yahay kulliyadaha ugu fiican California waxayna leedahay arday dhigta shahaadada koowaad ee hadda qiyaastii ah 17,000 taas oo macnaheedu yahay inay leedahay barnaamijyo shahaado iyo shahaadooyin oo aad u ballaaran. Ardayda caalamiga ah ee doonaya inay kasbadaan midkood ku -xigeenka fanka ama ku -xigeenka shahaadada sayniska ama shahaado -xirfadeed mid kasta oo ka mid ah kulliyadaha bulshada ee ugu wanaagsan California ayaa lagu soo dhaweynayaa inay halkan codsadaan.
9. Kulliyadda Santiago Canyon
Ma xiiseyneysaa inaad gasho xoogga shaqaalaha, xoojiso xirfaddaada, u wareejiso xarun afar sano ah, kor u qaadista jaranjarada tacliinta, ama aad noqoto qof xirfadle ah? Markaa Kulliyadda Santiago Canyon ayaa laga yaabaa inay tahay meesha kugu habboon. Kuleejku wuxuu bixiyaa shahaadooyin laxiriira farshaxanka iyo sayniska iyo shahaadooyin xirfadeed oo dhinacyo badan oo tacliimeed ah oo loogu talagalay inay daboolaan baahi kasta oo kor ku xusan.
Qaar ka mid ah barnaamijyada tacliinta waxaa ka mid ah dhaqaalaha, kalkaalisada, muusigga, qurxinta, ganacsiga, cilmiga xiddigiska, koodhka caafimaadka, xisaabinta, iwm.
10. Kulliyadda Mt San Antonio (Mt SAC)
Mt SAC, oo ku taal magaalada Walnut, waa mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ee ugu wanaagsan California oo bixisa in ka badan 260 barnaamijyo waxbarasho iyo xirfado kala duwan ah iyo in ka badan 3,000 oo fasallo online ah. Barnaamijyada la -hawlgalaha iyo shahaadooyinka waxaa ka mid ah la -talinta balwadaha, teknolojiyadda sayniska ee shaybaarka, dabka iyo teknolojiyadda, tikniyoolajiyadda nidaamyada kombiyuutarka, iyo inbadan.
Waxaad u wareejin kartaa xarun afar sano ah dhammaadka barnaamijkaaga si ay kaaga caawiso inaad keydiso kharashyada oo aad si dhakhso leh u hesho shahaadada koowaad ee jaamacadda. Haddii aad rabto inaad gasho xoogga shaqaalaha beddelkii xirfadaha iyo aqoonta aad ku kasban doontid shahaadadaada ama shahaadadaada ayaa kaa dhigi doonta xulashada ugu sarreysa ee loo -shaqeeyayaasha.
11. ​​Kuliyada Las Positas
Qaabka barashada onlaynka ah ama ikhtiyaarka waxbarasho fool-ka-fool ah ma ku habboon yahay? Midkuu doono ha ahaadee, Kulliyadda Las Positas waxay siisaa ardayda doonaysa inay raacaan oo kasbadaan midkood shahaado la -hawlgala ama shahaado xirfadeed mar uun bay'ad ay ka helaan wax badan oo ku habboon. Barnaamijyada laga bixiyo machadkan waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan shaqo lacag badan leh ama laguu wareejiyo xarun afar sano ah.
Kulliyadda Las Positas waxay ku taal Livermore waana mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ee ugu wanaagsan California, waxay diiwaan gelisaa qiyaastii 6,500 oo arday sannad walba waxayna siisaa adeegyo ardayda sida kaalmada maaliyadeed iyo adeegyada caafimaadka maskaxda.
12. Kuliyadda Diablo Valley
Hoy u tahay dad kala duwan oo bartayaal ah, oo ay ku jiraan kuwa ka soo qalin jabiyay dugsiga sare, ardayda beddelka ah, iyo bartayaasha nolosha oo dhan, Kuliyadda Dooxa Diablo waa mid ka mid ah kulliyadaha bulshada ugu fiican California. Waxay leedahay xarumo ku yaal Pleasant Hill iyo San Ramon oo siisa ardayda in ka badan 80 shahaadooyin laxiriira iyo barnaamijyo shahaado ah.
Fasallada waxaa lagu bixiyaa qaabab dhaqameed iyo onlayn ah laakiin halkaan kulleejkan, waxaad ku dhammayn kartaa shahaadada la -shaqaynta 100% khadka tooska ah meelaha sida maamulka caddaaladda, ganacsiga, iyo taariikhda.
13. Kuliyadda West Valley
Liiskayagii ugu dambeeyay ee kulliyadaha beesha ugu fiican California ee ku yaal West Valley College. Waxay ku taal Saratoga, Aagga San Francisco Bay, oo ay ku nool yihiin arday aad u hooseeya oo ah 2,510 shahaadada koowaad ee jaamacadda. Waxaa jira in ka badan 120 shahaadada shuraakada, shahaadada, iyo barnaamijyada wareejinta la xushay ee aad ka dooran karto. Qaar ka mid ah barnaamijyada waxaa ka mid ah xisaabinta, suuqgeynta, injineernimada, kalkaaliye, khabiir qoob -ka -ciyaarka, iyo qaar kaloo badan.
Kuwani waa faahfaahinta 13 kulliyadaha bulshada ugu fiican ee Kaalifoorniya, raadso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah kulliyadaha xiisaynaya xiisahaaga adoo raacaya xiriirrada la bixiyay ee ku lifaaqan.
Su'aalaha la isweydiiyo ee Kulliyadaha Beesha ugu Fiican California
Waa maxay kulliyadda beesha 1 ee California?
Lambarka 1 ama kulliyadda bulshada ugu sareysa ee California waa Kulliyadda Irvine Valley.
Kulliyaddee beesha California ayaa leh heerka qalin -jabinta iyo wareejinta ugu sarreeya?
Kulliyadda Dooxada Diablo waa kulliyadda bulshada ee California oo leh heerka qalin -jabinta iyo wareejinta ugu sarreeya.
Waa maxay kulliyadda bulshada ugu fiican ee loo wareejin karo UCLA?
In ka badan 100 kulliyadood oo bulshada California ah ayaa ardayda bedelka u dirta UCLA laakiin Kulliyadda Santa Monica ayaa ugu fiican inay tan samayso, oo u dirto qiyaastii 400 illaa 500 arday sannad walba UCLA.
3.7 GPA miyuu ku fiican yahay kulliyadda beesha ee California?
Celceliska GPA ee kulliyadaha bulshada ee Kaaliforniya waa 3.0 sidaa darteed, lahaanshaha 3.7 GPA aad buu uga sarreeyaa wuxuuna ku fiican yahay kulliyadda bulshada ee California.
Sida Loo Noqdo Professor Kuliyada Bulshada
10 Kulliyadaha Bulshada ee ugu Fiican Kanada Ardayda Caalamiga ah
20 Barnaamijyada Kuleejka Khadka Tooska ah ee Xiriirinta Codsiga
Sida Loogu Biiro Kuliyada Bulshada ee Ciidanka Cirka, Mareykanka
Tabaha Kaydinta Lacagta Kharashaadka Kulliyadda
Top 10 Kulliyadood oo aan Lacag Codsi ah ka Jirin Texas | Codso Hada
Barashada Hagaha Dibadda Baro Xirfad Online koorsooyinka interneedka Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo wax ku barta internetka
kulliyadaha bulshada ee ugu wanaagsan California
Previous Post:35+ Dugsiyada Ugu Fiican Autism -ka Shaqeeya Sare
Post Next:TOP 3 DUGSIYADA ILKAHA EE FLORIDA OO QABTA SHAQADA ILKAHA